November 2013 | Pyithu Hluttaw - ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဂျပန်နိုင်ငံ လွှတ်တော် House of Representative ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Mr. Bunmei IBUKI ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော်- နိုဝင်ဘာ ၂၈
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် ဂျပန်နိုင်ငံ House of Representative ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Mr. Bunmei IBUKI ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ည ၂၂း၁၀ နာရီချိန်ထွက်ခွာလာရာ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့၊ Narita လေဆိပ်သို့ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ၀၆း၄၅ ချိန်တွင် ရောက်ရှိပါသည်။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက နှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား ဂျပန်နိုင်ငံ House of Representative မှ Director General Mr. Toshiyuki IWADO နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးခင်မောင်တင် နှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ Narita လေဆိပ် မှ ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဇနီးခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ထွက်ခွာ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဇနီး ဒေါ်ခင်လေး သက် ခေါင်းဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဂျပန်နိုင်ငံလွှတ်တော် House of Representative ဥက္ကဋ္ဌ Hon. Mr. Bunmei IBUKI ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားရောက်ရန် ယမန်နေ့ ည ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ခွာသွားသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း (၂၇) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့များအား ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြား
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြသည့် သူရဦးအေးမြင့်၊ ဦးမောင်မောင်သိမ်းနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ မွန်းလွဲ (၁)နာရီတွင်
ပြည်သူတို့၏ ဆန္ဒ၊ ပြည်သူတို့၏ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းရန် ဆောင်ရွက်ကြရမည်။
ကလေး နိုဝင်ဘာ ၁၇
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ကလေးဒေသခံပြည်သူများ တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကို ယမန်နေ့မွန်းလွဲ ၂နာရီတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေးခရိုင် ကလေးမြို့ မြို့တော် ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။